एजेन्सी । राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको निधन भएको छ । ८० वर्षीय अन्नानको स्वीजरल्याण्डमा निधन भएको उनको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । सन् १९९७ देखि २००६ सम्म राष्ट्रसंघको महासचिवका रुपमा दुुई कार्यकाल बिताएका अन्नान, विश्वकै सर्वोच्च कुटनीतिक पदमा पुग्ने पहिलो अस्वेत नागरिक हुन् । राष्ट्रसंघको महासचिवबाट अबकास पाएपछि उनले राष्ट्रसंघकै विशेष दुतका रुपमा सिरियाको द्वन्द्व अन्त्यको […]
फ्री भिसा र फ्री टिकटको ठाउँमा ‘इम्प्लोयर्स पे मोडल’ ? के फरक छ ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा सुझाव दिन बनेको कार्यदलले फ्री भिसा र फ्री टिकटको ठाउँमा ‘इम्प्लोयर्स पे मोडल’ उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।कार्यदलले विदेशिने कामदारलाई ठगिनबाट जोगाउन यो मोडल उपयुक्त हुने बताएको हो । आर्थिक भारलाई ‘शून्य’ मा झार्न र कामदारलाई सजिलो बनाउनका नयाँ सुझाव दिएको छ । कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण […]
पाकिस्तानी संसदमा पहिलो पटक हिन्दू प्रतिनिधित्व
इश्लामावाद- पाकिस्तानको केन्द्रीय संसदमा पहिलो पटक गैरमुश्लिम सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी)का महेश मलानी पाकिस्तानको इतिहासमा संसदको तल्लो सदनको सांसद बन्ने पहिलो हिन्दू व्यक्ति बनेका हुन् । पाकिस्तानी निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी पत्रिका डनले दिएको जानकारी अनुसार मलानीले सिन्ध प्रान्तको एनए–२२२ (थारपारकर–दोस्रो)बाट निर्वाचन लडी एक लाख छ हजार ६३० मत ल्याई […]
भिसा लागेका २२५ जनाले लिए मलेसियाको अन्तिम श्रम स्वीकृति
काठमाडौँ– झण्डै दुई महिनापछि खुलेको मलेसियाको अन्तिम श्रम स्वीकृति २ सय २५ जनाले लिएका छन् । गत जेठ २ गतेबाट बन्द भएको मलेसियाको अन्तिम श्रम स्वीकृति गत आइतबार खुलेको छ । मलेसियाका लागि अहिले पनि जेठ २ गते पहिले नै भिसा लागेका कामदार मात्रै जान पाउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस्ता कामदार ४६६ जना […]
काठमाडौं-मलेसियाले नेपालीलगायत आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि श्रम कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया थालेको छ । मलेसियाले १४ देशका श्रमिकको सुरक्षामा थप ध्यान दिँदै विद्यमान श्रम कानुनमा संंशोधनको प्रक्रिया थालेको हो । रोजगारीका लागि जाने युवासँग चर्को सेवा शुल्क लिएको सम्बन्धमा नेपालले गरेको अनुरोधपछि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार माग गर्ने सम्बन्धमा कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो […]
भारतकाे प्रतिष्ठित ‘जी सिने अवार्ड’ यसपटक नेपालमा
काठमाडौँ– बलिउडको चर्चित ‘जी सिने अवार्ड’काे आउँदो संस्करण यस वर्ष नेपालमा हुने भएको छ। बलिउडमा निकै प्रतिष्ठित मानिने ‘जी सिने अवार्ड’ को नयाँ संस्करण नेपालमा गर्न लागिएको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। अर्वाड समारोहको तयारीका लागि भारतका राज्यसभा सदस्य डा.सुवासचन्द्र र जी टिभीका मालिकसहितको टोली नेपाल आएर अध्ययन गरी फर्किइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा […]
Posted in Videos,पर्यटन,प्रवास,मनोरञ्जन,मल्टिमिडिया,साहित्य / कला Read More »
काठमाडौँ,४ साउन।विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पैसा उठाएर नेपालमा नपठाउने गरेको पाइएको छ । पछिल्ला महिनामा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनुको कारण विदेशी रेमिट कम्पनीको ठगी पनि एक प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि पछिल्लो समयमा अनुसन्धानमा लागेको छ । तर, […]
Posted in प्रवास,बिजनेस / अर्थ Read More »
कोरियाले बढायो ११ प्रतिशत तलव
काठमाडौं- ४० हजार नेपाली लाभान्वित हुने गरि दक्षिण कोरिया सरकारले श्रमिकको तलब झण्डै ११ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको छ । सन् २०१९ देखि लागू हुने गरी कामदारको तलब १० दशमलव ९ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको हो । सन् २०१९ का लागि तय गरिएको न्यूनतम ज्याला वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इनले राष्ट्रपति निर्वाचन ताका गरेको प्रतिबद्धता […]
सीप नभएका युवालाई अब वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाइने
मूलखबर,२८ असार । प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप नभएका युवालाई अब वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाइने भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजराीमा जाने युवालाई अनिवार्य कामसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीपको ज्ञान हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन तयारी गरेको छ। श्रम, रोजकार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारको पहिलो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार नभई देशभित्रको रोजगारी रहेको जनाउँदै रोजगारीको अल्पकालिन विकल्पका […]
नौ महिनाअघि अमेरिका पुगेका बजगार्इंको हत्या
मूलखबर,२७ असार । अमेरिकाको भर्जिनियामा एक नेपालीको हत्या भएको छ । भर्जिनियाको हर्नडन्डस्थित ग्यास स्टेसनमा काम गर्दै आएका रमेश बजगाई‌को लुटेरा समूहले हत्या गरेको हो । पुर्ख्यौली घर गोरखा भएका बजगाईंको परिवार अहिले चितवनको भरतपुरमा बसोबास गर्दै आएको छ । स्टेसनमा काम गरिरहेका उनलाई लुटेराको समूहले गोली हानी हत्या गरेको हो । उनी नौ महिनाअघि मात्रै अमेरिका पुगेका […]